व्हतै घट्यो सुन को भाउ हेर्नुहोस आज को सुन को मुल्य – " सुलभ खबर "
व्हतै घट्यो सुन को भाउ हेर्नुहोस आज को सुन को मुल्य
काठमाण्डाै – सुनको भाउ मङ्गलबार तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेको छ ।सुन मङ्गलबार तोलाको ७६ हजार रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
साेमबार र आइतबार तोलाको ७६ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ मङ्गलबार घटेकाे हाे । यस्तै तोलामा १० रुपैयाँ घटेर चाँदी तोलाको आठ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
चीनबाट आयात रोकिएसँगै सुकेको लसुनको भाउ आकासियाे
काठमाण्डाै – चीनबाट आयात रोकिएसँगै लसुन झण्डै तीन गुणाले महँगो भएको छ ।एक महिनाअघि किलोको दुई सय ४५ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य रहेको लसुनको भाउ बढेर किलोको ६ सय पाँच रुपैयाँ पुगेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
आयात बन्द भएसँगै व्यापारीले यसअघि नै ल्याएको लसुनको भाउ बढाएका हुन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेपछि चीनवाट आयात रोकिँदा लसुनको भाउ बढेको कालिमाटी थोक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भरत खतिवडाले बताउनु भयो ।
अहिले आयात ठप्प रहेको र गोदाममा भण्डारण गरिएको लसुन पनि सकिन लागेकोले अब केही दिनमा बजारमा सुकेको लसुन नपाइने उहाँको भनाइ छ । नेपालमा बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँको सुकेको लसुन चीनबाट आयात हुने गरेको छ ।
पारस र सन्दीप टी–२० वरीयतामा दुई स्थान तल झरे
काठमाण्डाै – अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसिसी) को टी–२० वरीयतामा नेपाल यथावत् स्थानमा रहेको छ ।आईसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयताअनुसार नेपाल टी–२०मा १२औँ स्थानमा छ । यसअघि पनि नेपाल १२औँ स्थानमा नै थियो ।
नेपाल टी–२० वरीयतामा ११ औँ स्थानसम्म पुगेको छ । टी–२० विश्व वरीयतामा पाकिस्तान शीर्ष स्थानमा, अस्ट्रेलिया दोस्रो, इङ्ग्ल्याण्ड तेस्रो, भारत चौथो र दक्षिण अफ्रिका पाँचौँ स्थानमा छन् ।
टी–२० काे खेलाडी वरीयताअन्तर्गत ब्याटिङतर्फ नेपालका पारस खड्का ६२औँ स्थानमा छन् । यसअघि उनी ६०औँ स्थानमा थिए ।यसैगरी बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछाने ८५औँ स्थानमा छन् । यसअघि उनी ८३औँ स्थान थिए । अलराउण्डरतर्फ पारस २७औँ, सोमपाल कामी ६५औँ र करण केसी ७५औँ स्थानमा छन् ।
साताको पहिलो दिन आज नेपालमा यति धेरै घट्यो सुनको मुल्य
काठमाडौं । लगातार बढ्दै गएको सुनको मुल्य नेपाली बजारमा आज घटेको छ । साताको पहिलो
सुनको भाउमा अर्को रेकर्ड,आज तोलामा यति धेरै ले ब,ढ्यो सुनको मुल्य
काठमाण्डौ – सुनको भाउ उकालो लाग्ने क्रम आज पनि कायमै छ । आज तोलामा ११
किन आकासियो सुनको मूल्य ?
काठमाडौं । लकडाउन खुलेपछि निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउले बुधबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ
१ तोला सुनको मूल्य एक लाख एक हजार ४ सय
काठमाण्डाै – सुनको भाउ तोलाको एक लाख रुपैयाँ नाघेको छ । आज एकैदिन तोलामा १६
सुनको मूल्य तोलाको ९९ हजार ६ सय रुपैयाँ
काठमाण्डौ – सुनको भाउ तोलाको झण्डै एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आज तोलामा ३
आज सोमबार सुनचाँदीको मुल्यमा यति धेरै ले गिरावट
नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्यमा सामान्य रुपमा गिरावट आएको छ ।सुनको मूल्य तोलामा रु २
राति १० बजेपछि हिँडडुल गर्न नपाइने: लकडाउन खुकुलो हुँदा के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ? (पूर्णपाठ)
विद्यालय सञचालन नगर्न अभिभावकहरुले गरे आग्रह
भगवान बुद्धलाई महान भारतीय भन्ने भारतका विदेशमन्त्रीलाई नेपालले फर्कायो यस्तो जवाफ
क्वारेन्टिन नियम तो,डे,को आ,रो,प,मा पाँच दिन जेल